ဝိဇ္ဇာနှင့်ဖျော်ဖြေမှု | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: ဝိဇ္ဇာ & Entertainment က
အပေါ် Posted 15.09.2019 18.09.2019
ငှက်ချယ်ရီပင်သည်အရွယ်အစားကြီးမားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည် 12 မီတာအမြင့်သို့ရောက်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်ငှက်ချယ်ရီသည်ရေကန်များနှင့်မြစ်ကမ်းပါးများတစ်လျှောက်တွင်ပေါက်နေသည်။ ၎င်းကိုစိုစွတ်သောသစ်တောများတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည်။ ပန်းများ ...
Mazurka အက: မူရင်းနှင့်ဖော်ပြချက်
အပေါ် Posted 15.09.2019 27.09.2019
Mazurka ကခုန်ပိုလန်၌ထင်ရှား၏။ အဲဒီမှာသူကအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားဟုခေါ်သည်။ အဲဒါကို "Mazur" လို့ခေါ်တယ်။ ဒီအကကအရမ်းမြန်ပြီးအားအင်ပြည့်ဝတယ်။ သူ၏ဇာတိမြေမှာ Mazovia ဖြစ်ပြီးမာဆိုရီးယားဟုခေါ်သူများလူများနေထိုင်ကြသည်။
Aldanov၊ စာတန်တံတား။ ဝတ္ထု၏အကျဉ်းချုပ်နှင့်အင်္ဂါရပ်များ
နာမည်ကျော်ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ 80's ကိုပြန်သတိရပါ
အပေါ် Posted 15.09.2019 13.11.2019
၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၏ရော့ခ်သည်အမျိုးအစားအသစ်များကိုအကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှုရရှိစေပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်များ၏လမ်းညွှန်ချက်များသည်နောက်ခံမှေးမှိန်သွားသည်ဟူသောအချက်ဖြစ်သည်။ အလွန်ငယ်ရွယ်သောဂီတပညာရှင်များဖန်တီးခဲ့သော 80 ၏ရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့များကသူတို့၏ဆန္ဒကို ...
မင်းသမီး Lyudmila Ivanova: အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
လုဒမီလာအိုင်ဗန်နိုဗာသည်အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုလေးစားထိုက်သောမင်းသမီးတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုမှာအလွန်ခက်ခဲခဲ့သည်၊ သို့သော်သူသည်အရာရာကိုကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီးကလေးဘဝကတည်းကသူကြိုးပမ်းခဲ့သမျှကိုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ မော်စကိုတွင်မွေးဖွားခဲ့သည် ...
မင်းသား Yevgeny Kindinov: အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ, ဓာတ်ပုံများ
Evgeny Kindinov, ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင်သူ၏ဓာတ်ပုံသည်ယခုသင့်ရှေ့တွင်ရှိနေသည်၊ သူမအနေဖြင့်သူ့အားချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်ခံစားမှုများစွာခံစားခဲ့ရသည်။ ငယ်ငယ်တုန်းကမင်းသားကအရမ်းလှတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူကသာချစ်ခဲ့တယ် ...
Flemish ပန်းချီကား။ Flemish ပန်းချီ၏နည်းပညာ။ Flemish ပန်းချီကျောင်း
အပေါ် Posted 15.09.2019 05.10.2019
ခေတ်သစ် Avant-garde လှုပ်ရှားမှုများနှင့်မတူဘဲ Classical Class သည်ကြည့်ရှုသူများ၏နှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ရခဲ့သည်။ အစောဆုံးဒတ်ခ်ျအနုပညာရှင်များ၏လက်ရာနှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သူမည်သူမဆိုအတွက်အထင်ရှားဆုံးနှင့်ကြွယ်ဝသောဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာကျန်ရှိတော့သည်။ Flemish ...
Tchaikovsky သည်ဆင်ဖိုနီမည်မျှရေးသားခဲ့သနည်း။ ထို့ထက်မက၊ ထိုအားလုံးပါပဲ - သူတို့တောက်ပဖြစ်ကြသည်
အပေါ် Posted 15.09.2019 08.10.2019
Pyotr Ilyich Tchaikovsky သည် ၁၉ ရာစုမှရုရှားတေးရေးဆရာဖြစ်သည်။ သူ၏ဂီတသည်ရောင်စုံမှု၊ အချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ထူးကဲသော melodic ကြွယ်ဝမှုတို့ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ P.I. Tchaikovsky ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရုရှားဂီတအနုပညာသည်မကြုံစဖူးသောအမြင့်ကိုရောက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ...
"Fast and the Furious 7" ရုပ်ရှင်၏သရုပ်ဆောင်များ၊ သို့မဟုတ် Paul Walker မပါပဲရုပ်ရှင်ကိုမည်သို့ရိုက်ကူးခဲ့သနည်း
အပေါ် Posted 15.09.2019 06.11.2019
“ Fast and the Furious 7” ရုပ်ရှင်၏သရုပ်ဆောင်များနှင့်နို ၀ င်ဘာလတွင်စီမံကိန်း၏အမှုဆောင်များသည် 2013 ၏နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်အဓိကမင်းသား Paul Walker သည်သူ၏အလုပ်ပြီးဆုံးခြင်းမရှိဘဲသေဆုံးသွားသည်ကိုအံ့အားသင့်ခဲ့သည်။
Mirage အုပ်စု - သမိုင်း၊ discography၊ ဓာတ်ပုံ။ ဟောငျးတီးဝိုင်းဖွဲ့စည်းမှု
အပေါ် Posted 15.09.2019 25.11.2019
ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာဆိုဗီယက်ယူနီယံခေတ်တုန်းကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တချိန်ကပေါ်ပြူလာဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းနဲ့ငါတို့ခင်မင်ရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်။ ဒါက Mirage အုပ်စုပါ။ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ...
"တပါးအမျိုးသားတို့၏ဖခင်သား" ဇာတ်လမ်းတွဲ - သရုပ်ဆောင်နှင့်ဇာတ်လမ်းတွဲ
2013 တွင်တစ်နှစ်ခွဲကြာစမ်းသပ်ခြင်း၊ ရိုက်ကူးခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းပြီးနောက်“ ရုရှား၊ ဘီလာရုစ်နှင့်ယူကရိန်းတို့၏သခင် - ပြည်သူ့တို့၏ဖခင်၏သား” ရုပ်ရှင်၏ပူးတွဲအလုပ်ဖြင့်ဖန်သားပြင်များကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။ ဒီစီးရီးကိုကြည့်ဖို့နောက်ထပ်ကြိုးပမ်းမှု ...
မော်စကိုတွင်, Variety ပြဇာတ်ရုံ: ပိုစတာ, လက်မှတ်တွေ, ဓာတ်ပုံနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
ဤအဆင့်သည်မော်စကိုတွင်လူကြိုက်များသည်။ ပေါ့ပ်ပြဇာတ်ရုံသည်နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိခဲ့သောမြို့တော်မှဒေသခံများနှင့် guests ည့်သည်များအားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အစည်းအဝေးများစွာကိုပေးခဲ့သည်။ ပြဇာတ်ရုံနှင့်ရော့ခ်အဖွဲ့များသည်ယင်း၏စင်မြင့်ပေါ်တွင်ဖျော်ဖြေကြသည်။
Lyudmila Zorina: အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်မင်းသမီး (ဓါတ်ပုံများ) ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
အပေါ် Posted 15.09.2019 12.12.2019
Lyudmila Zorina ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိသည်စစ်မတိုင်မီနှစ်များတွင်စတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မစခင်နှစ်လအလိုတွင်၊ 1 တွင်မေလ 1941 တွင်နယူးယောက်မြို့ရှိလှပသောအမည်ရှိမွေးဖွားခဲ့သည်။ ငယ်ငယ်ကတည်းကမိန်းကလေးတစ်ယောက် ...
ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအဖိုးတန်ဆုံးသောသတ္တုများအနက်မှတစ်ခုအဖြစ်ရွှေကိုမှန်ကန်စွာစဉ်းစားသည်။ ၎င်းသည်ဓာတ်တိုးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး၎င်း၏တောက်ပမှုသည်ထာဝရဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောဇိမ်ခံပစ္စည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ထံရောက်ရှိနိုင်သည်။
Marshak အက်စ်ယာသည်သူ၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင်မည်သည့်အရာများကိုရေးသားခဲ့သနည်း။
Marshak Samuel Yakovlevich ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင်လူသိများသည်။ စာရေးဆရာရဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်အပေါ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်မကကြီးပြင်းလာတယ်။ အခြေခံအားဖြင့် Marshak ကိုကလေးစာရေးဆရာတစ် ဦး အဖြစ်လူတိုင်းသိသော်လည်း Samuel Yakovlevich ကတော့ ...
Fazu Aliyeva: နှစ်ဆယ်ရာစု၏အကြီးကျယ်ဆုံးကဗျာဆရာများ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အပေါ် Posted 15.09.2019 02.12.2019
2016 နှစ်သစ်၏ပထမနေ့တွင်အလွန်ကြီးကျယ်သော Avar နှင့်ဆိုဗီယက်ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာ Fazu Aliyev အတွက်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောနာမည်မရှိသောစာရေးဆရာမဖြစ်လာခဲ့ပါ။ ဒီထူးချွန်အမျိုးသမီး၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ ...
ဒဏ္legာရီကဘာလဲ? စကားလုံး "ဒဏ္"ာရီ" ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
တကယ်တော့ဒဏ္legာရီဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားဘဲ“ ဒဏ္legာရီတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခြင်း” စသည့်စကားလုံးများနှင့်အသုံးအနှုန်းများကိုယခုမည်မျှကြားနာရသနည်း။ အဓိကရင်းမြစ်များသို့ပြန်လှည့်ပါက legenda ဟူသောစကားလုံးသည်လက်တင်ဘာသာစကားမှလာသည်။ ဒါ ...
ဒဏ္adesာရီဇာတ်လမ်း "Spades ဘုရင်မ" ။ ဇာတ်လမ်း၏အဓိကအကြောင်းအရာများ
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိုဘကြီးမှု၊ ကံကြမ္မာကိုလှည့်ဖြားလိုသောဆန္ဒသည်မရနိုင်သောထိပ်များသို့တက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုတွင်အင်ဂျင်နီယာ Herman ၏ဇာတ်လမ်း၏အဓိကဇာတ်ကောင်များ၏မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Dostoevsky သည်လူ၏ပြာကိုလောင်ကျွမ်းစေသောဤစိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြသလိမ့်မည်။
Strugatsky ညီနောင်များ "ကလေး" - အကျဉ်းချုပ်နှင့်အလုပ်၏ပြproblemsနာများ
"Baby" ဆိုဗီယက်စာရေးဆရာများ၏အထင်ကရလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သောသိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်အမျိုးအစားတွင်အာကဒီနှင့် Boris Strugatsky တို့၏ဝတ္ထုဖြစ်သည်။ ၎င်းကို 1971 နှစ်တွင် Aurora ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဘာစိတ်ကူးထားလဲ ...
အပေါ် Posted 15.09.2019 16.10.2019
“ ငါတို့အချိန်၏သူရဲကောင်း” သည်ငါတို့တိုင်းပြည်တွင်ပထမဆုံးစိတ်ဓာတ်ရေးရာဝတ္ထုဖြစ်သည်။ Lermontov သည်ဇာတ်ကောင်များ၏လုပ်ရပ်များနှင့်အတွေးအခေါ်များကိုဆန်းစစ်ခြင်းအားဖြင့်စာဖတ်သူများအားသူ၏အတွင်းစိတ်ကမ္ဘာကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဤကြားမှ ...
စာမျက်နှာ 1 စာမျက်နှာ2... စာမျက်နှာ 165 Next ကို 's Page
14 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,588 စက္ကန့်ကျော် Generate ။